Rakkoo 'Wow Air' mudateen imaltoonni kumaatamaan lakkaa'aman danqaman - BBC News Afaan Oromoo
Daandiin xiyyaaraa Ayislaand Wow Air jedhamu balalii dhaabuu isaatiin imaltoonni kumaatamaan lakkaa'aman danqamanii jiru.
Fuula marsariitii Wow Air irratti akka ibsametti dhaabbatichi hojii dhaabuu isaatiin balali'a hunda haqeera. Wow akka jedhutti imaltoonni deemuu barbaadan daandii xiyyaara biroo fayyadamuun imaluu danda'u.
Daandii xiyyaaraa kun invastaroota waliin dhimma fandii irratti kan waliin dubbachaa ture yommuu ta'u Landan Stansted fi Gatwick irraatii kan UK keessa tajaajila balali'uu kennu.
Xiyyaarri biyya Jarman deemuuf ture dogongoraan Edenbiraa qubate
Dhaabbatichi daandii xiyyaarotaa gatii gadi bu'aa ta'e bifa gargaarsaatiin tajaajila kennuu akka danda'an himee tajaajilli akkasii yeroo argamutti odeeffannoo barbaachisan karaa fuula marsariitii isaanii irratti akka baasu beeksiseera.
Ediitarri imalaa Independent, Simoon Kaalder, daandiiwwan xiyyaaraan biroon qaawwa uumame kana karaa duuchuutiin tajaajila ni kennuu, "haala badaa" uumame kanaan qabataniis maallaqa argachuudhaafis fedha hin qaban jedhan.
"Hanga dhimma isin ariifachiisu hin qabaannetti balali'insa biroo barbaachaaf jecha baasiif saaxilamuu hin qaban," jedhan.
Daandiiwwan qilleensaa warri akka Wizz Air, Easyjet fi kan warra Noorwey tajaajila balali'insaa kennaa turan, jechuun ibsan.
Fuuola Wow irratti akka dhiyaatee jiruun dhaabbatichi tooftaawwan ittiin rakkoo kana sirreessu dhiyeesseera.
Ibsichi akka agarsiisutti imlatoonni karaa toora interneetiitiin dhaabbata biroo kan akka karaa kirediit kaardiiin ykn karaa ejentii imala Awurooppaatiin isaaniif kaffalame, karuma isaanii maallaqa isaanii kaffalan deebisanii argachuu yaaluu qabu jedhameera.
Kana ta'uu baannaan ammoo Wow irraa beenyaa argachuu akka danda'anidha, " kun ammoo akkaataa danbii Mirgoota Imaltoota Xiyyaaraa Awurooppaatiin" ykn yeroo kasaaraatti, beenyaa gaafachuun gara bulchiinsaa ykn gara warra dhimmicha furaniitti iyyatama.
Goodayyaa suuraa Hundeessaafi gaggeessaa Wow Air Skuli Mogensen keessumsiitota waliin
Wow bara 2011 gaggeessaa dhaabbatichaa, Skuli Mogensen tiin ture kan hundeeffame. Tajaajila balaliisaa kennuu bara 2012 kan eegale yommuu ta'u namoota 1,000f carraa hojii uumuun xiyyaarota 11 qabu fayyadamee waggaa darbe namoota miliyoona 3.5 imalchiiseera.
Tajaajila imala gabaabaafi dheeraa kan kennu yommuu ta'u Awurooppaa keessa gara Kopenhageniifi Alicante tti US keessaa ammoo gara Waashingiteeniifi Bostenitti balali'a.
Erga dhiyoon asitti daandiiwwan xiyyaaraa hedduun sababa gatiin boba'aa dabaleen akkasumas sektericha keessatti humna guddaan kan dorgoman jiraachuu irraan kan ka'e rakkoo maallaqaa keessa galaniiraa jiru.